Kitra - lalao afrikanina isan-tarika :: Mahita tsirim-panantenana amin’ ny Fosa Juniors ny mpanazatra • AoRaha
Kitra – lalao afrikanina isan-tarika Mahita tsirim-panantenana amin’ ny Fosa Juniors ny mpanazatra
Vonona ny mpilalao baolina kitra ao amin’ny Fosa Juniors FC, hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika na ny “Ligue des champions”, izay hihaonany amin’ny TP Mazembe (RD Congo), amin’ny 15 septambra ho avy izao, any amin’ny kianja Rabemananjara, Mahajanga. “Manana tsirim-panantenana amin’ireo mpilalao rehetra aho”, hoy Rasoanaivo Titi, mpanazatra ny Fosa Junior FC, taorian’ny lalao ara-pirahalahina nataon’izy ireo tamin’ny Jet Mada, omaly.
Nandresy tamin’ny isa 3 noho 1 ity tompondakan’ny Ligy Boeny ity tany amin’ny kianja Rabemananjara, Mahajanga. “Saika nahatoky tena sy maika loatra ny mpilalao androany (ndlr: anio). Tsy ny Jet Mada anefa no tena hifanandrina aminy fa ny TP Mazembe, izay ekipa tena mafy”, araka ny fanazavan’itsy mpanazatra itsy hatrany.
Tsara fiomanana ny Fosa Juniors raha ny nambaran’ny mpanazatra azy. “Mandringa ny fanomanan’ny klioba eto Madagasikara amin’ny ankapobeny. Ao anatin’ny fifaninanam-pirenena na tena fihaonana mihitsy no hatrehin’ireo ekipa any ivelany rehefa manomana fifaninanana lehibe toy izao. Lalao ara-pirahalahina anefa no hoentin’ny ekipa eto an-toerana manazatra ny mpilalao mialoha ny tena fifandonana”, hoy izy.
Niezaka ny nanarina ireo lesoka hita nandritra ny lalaon’ny Fosa Juniors FC sy ny Pamplemousses ihany anefa ny mpanazatra mialoha ny lalao amin’ny alahady ho avy izao. “Olana hita tamin’ny ekipa ny tsy fahafehezana ny famaranana na ny famonoana baolina. Niezaka hatrany ny nanamafy izany izahay. Efa hita ny fivoarana nandritra ny lalao miverina tany Maorisy saingy mbola tsy ampy. Mbola izay hatrany ny tena nilofosana nandritra ny fanazarantena faramparany. Ekipa mafy ny TP Mazembe sady efa zatra ady saingy eny ambony kianja no tena hita ny tena marina rehetra”, hoy Rasoanaivo Titi, namarana ny resaka.
Baolina lavalava – « Gold top 20 » Nahazo ny tapakila amin’ny famaranana ny Cosfa sy ny TFA
Fikaonandoham-pirenena Hangonina ny hevitr’ireo mpanaraka baolina kitra any amin’ny faritra
Atletisma – Afrika Atleta roa no handeha any Togo
Baolina lavalava – Lalao sakana :: Nandavo ny Atsinanana Rugby ny Cnaps tany Mahajanga
Basket-ball- Fifaninanam-pirenena :: Mitohy ny fahombiazan’ny mpilalaon’ny zandarimaria